पाँच पटकको बिजेता ब्राजिल दोस्रो चरणमा मेक्सिकोसँग भिड्ने
२०७५ असार १४ बिहिबार, काठमाडौं। ब्रजिल विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। समुह 'ई'को बिजेता हुँदै ब्रजिल दोस्रो चरण प्रवेश गरेको हो भने स्विजरल्याण्ड समुहमा दोस्रो हुँदै 'राउण्ड अफ सिक्सटिन' (दोस्रो चरण) मा प्रवेश गरेको छ। ... बाँकी अंश»
२१ औं शताब्दीको खेल, यसपटक विश्वकप अर्को पटक समूह चरणबाटै ‘आउट’
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको २१ औं शताब्दीमा अचम्मको संयोग बनेको छ । यो शताब्दीमा विश्वकपका ‘साविक विजेता’ हरु अर्को पटक समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रमुख दावेदार जर्मनी विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरियो
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । समूह एफको खेलमा सबैभन्दा पुछारमा रहँदै जर्मनी बाहिरिएको हो । ... बाँकी अंश»
नेयमारको व्राजिल हराउँदै दोस्रो चरणमा पुग्ने सर्वियाको लक्ष्य
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । बुधबार समुह 'ई' अन्तर्गत ब्राजिल र सर्वियाको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेपाली समयअनुसार राति पौने १२ बजे उनीहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको हो । ... बाँकी अंश»
स्विट्जरल्याण्डका खेलाडी प्रतिबन्धले कोस्टारिका उत्साहित
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं। बुधबार विश्वकपमा समुह ईका दुई टोलीहरु कोस्टारिका र स्विट्जरल्याण्डको बीचमा खेल हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार रातको पौने १२ बजे उनीहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको हो। कोस्टारिका विश्वकपबाट बाहिरिसकेको टोली हो भने स्विट्जरल्याण्डको लागि यो खेल निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। ... बाँकी अंश»
जर्मनीलाई घर फर्काउने तयारीमा एशियन मुलुक कोरिया
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । बुधबार विश्वकपमा समुह एफ अन्तर्गतका जर्मनी र दक्षिण कोरियाको बीचमा खेल हुँदैछ । ... बाँकी अंश»
अर्जेन्टिना र नाइजेरियाबीचको ‘भाइटल म्याच’ मा रेफ्रीले किन दिएनन् ह्याण्डबल ?
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको समुह डी अन्तर्गतको मंगलबार राति भएको नाइजेरिया र अर्जेन्टिनाको खेल दुवै टोलीका लागि महत्वपूर्ण थियो । जसमा बराबरीको नतिजाले नाइजेरिया राउन्ड अफ सिक्सटिनमा पुग्न सक्थ्यो भने अर्जेन्टिनाको लागि जित आवश्यक थियो । ... बाँकी अंश»
मेक्सिको भर्सेस स्वीडेन, यसो भन्छ ‘हेड टु हेड’
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । बुधबार विश्वकपको समुह एफ अन्तर्गत मेक्सिको र स्वीडेनको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेपाली समयअनुसार उनीहरुको बीचमा पौने ८ बजेबाट प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ... बाँकी अंश»
राउन्ड अफ सिक्सटिनमा जर्मनी कि स्वीडेन !
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । रुस विश्वप फुटबलको समूह एफ्बाट मेक्सिको लगातार दुई जित सहित राउन्ड अफ सिक्सटिनमा पुगिसकेको अवस्थामा जर्मनी र स्वीडेनमध्ये एक टिम पनि पुग्नेछ । ... बाँकी अंश»
अर्जेन्टिनाका फरक फरक फ्यान, कसरी मनाए खुशी [भिडियोसहित]
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको राउन्ड अफ सिक्सटिनमा पुग्ने नपुग्नेमा द्धिविधा थियो । तर अचम्मैसंग पुग्यो । ... बाँकी अंश»
विश्वकपमा ब्राजिल, स्वीट्जरल्याण्ड र सर्बियामध्ये कुन दुई ?
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको समूह चरणका अन्तिम खेलहरु हुँदै गर्दा समूह ‘ई’ बाट अहिलेसम्म एउटा टिमको पनि टुंगो लागेको छैन । अंकविहिन कोस्टारिका बाहिरिइसकेको अवस्थामा ४ अंकका ब्राजिल र स्वीट्जरल्याण्ड तथा ३ अंकको सर्बियामध्ये दुई टिम राउन्ड अफ सिक्सटिनमा पुग्नेछन् । ... बाँकी अंश»
‘इमोसन’ मा आएपछि म्याराडोनाको यस्तो हालत भयो
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । राष्ट्रको जितमा एउटा खेलाडी कहाँसम्म पुग्दोरहेछ भन्ने बुझ्नका लागि डिएगो म्याराडोनाको मंगलबार राति भएको घटना बुझ्दा काफी हुन्छ । म्याराडोनाले सन् १९८६ मा अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाएपछि टिमले अर्को कप उचाल्न पाएको छैन । ... बाँकी अंश»
पेरुलाई विश्वकपमा पहिलो खेल जित्न लाग्यो ४० वर्ष
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । पेरुलाई विश्वकप फुटबलको फाइनल चरणमा पहिलो जित हासिल गर्न ४० वर्ष लाग्यो । पेरुले मंगलबार राति अष्ट्रेलियामाथि २–० को जित हासिल गर्यो । ... बाँकी अंश»
तीन गोलमा समूह बिजेता फ्रान्स ! के गर्ला अगाडि
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलमा समूह सी को विजेता बनेको फ्रान्स त्यस्तो एकल टिम हो जसले समूह चरणमा मात्र ३ गोल ग-यो । तर समूह विजेता बन्यो । ... बाँकी अंश»
आखिर रहेछन् मेस्सी नै एक
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । ओहो ! दुई पटकको विश्वकप विजेता तथा साविकको उपविजेता अर्जेन्टिना अन्ततः रुस विश्वकप फुटबलको राउन्ड अफ सिक्सटिनमा पुगेको छ । निकै असहज र कठिन यात्रा पार गर्दै अर्जेन्टिनाले यो दूरी तय गरेको हो । ... बाँकी अंश»
मेस्सीको गोलले अर्जेन्टिना दोस्रो चरणमा, क्रोएसिया पहिलो
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं। रसियामा जारि विश्वकप फुटबलको समूह 'डि'को खेलमा अर्जेन्टिनाले नाईजेरियालाई पराजित गरेको छ भने क्रोएसियाले आईसल्याण्डलाई पराजित गरेको छ। ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबल: फ्रान्स र डेनमार्क 'राउण्ड अफ सिक्सटिन'मा
२०७५ असार १२ मंगलबार, काठमाडौं। रसियामा जारि विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा समुह 'सी'बाट फ्रान्स र डेनमार्क पुगेका छन्। समुहको अन्तिम खेलमा फ्रान्स र डेनमार्कले गोल रहित बराबरी गरेका थिए। ... बाँकी अंश»
विश्वकपमा भीएआरको कमाल, कीर्तिमानी पेनाल्टीमा चुके रोनाल्डो
२०७५ असार १२ मंगलबार, काठमाडौं । रुस विश्वकपमा पेनाल्टीको नयाँ कीर्तिमान बसेको छ । सोमबार भएको समुह 'बी' अन्तर्गतको पोर्चुगल र इरानको खेलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि गरिएको फाउलमा प्रदान गरिएको पेनाल्टीसँगै विश्वकपमा सबैभन्दा बढी पेनाल्टीको कीर्तिमान बसेको हो । यद्यपि सो पेनाल्टी इरानका गोल रक्षकले बचाएका थिए । ... बाँकी अंश»
क्रोएसिया हराउने दाउमा आइसल्याण्ड, सिगर्डसनको प्रदर्शनमा अर्जेन्टिनाको भाग्य
२०७५ असार १२ मंगलबार, काठमाडौं । समुह 'डी' अन्तर्गत मंगलबार क्रोएसिया र आइसल्याण्डको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेपाली समयअनुसार राति पौने १२ बजे उनीहरुको बीचमा यो प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको हो । ... बाँकी अंश»
'गर वा मर' को अवस्थामा अर्जेन्टिना, नाइजेरिया विरुद्ध मेस्सीको परीक्षा
२०७५ असार १२ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वकपको समुह डी अन्तर्गत मंगलबार अर्जेन्टिना र नाइजेरियाको बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यो खेल धेरैको चासो परेको खेल हो । ... बाँकी अंश»